(tonga teto avy amin'ny Anglisy)
Ny Fiteny anglisy (English [/ˈɪŋɡlɪʃ/]) dia fiteny jermanika avy any Angletera. Io no tenim-pirenena nahabe ny mponina anatin'ny firenena maro, indrindra any Royaume Uni sy ny zanataniny taloha : Etazonia, Kanada, Aostralia, Afrika Antsimo, India. Ireo zanatany taloha izay mbola mampiasa ny teny anglisy dia lazaina fa ao amin'ny tontolo miteny anglisy, izay manana anarana anglosphere amin'ny teny anglisy.
Ny fiteny anglisy dia fiteny voasokajy ao amin'ny fiteny rmanika andrefana, any Eoropa. Ny teny anglisy dia avy amin'ny tenin'ny foko jermanika tonga nipetraka ao Britania (Ilay nosin'i Britania) ary nianjadian'ny fitenin'ny mpanjanatany avy any Skandinavia, avy any Normandia ary avy any Frantsa Avaratra tamin'ny Andro Antenantenany (frantsay: Moyen Âge), ary taty aoriana voaanjadin'ny teny frantsay ankehitriny. Tahaka ny fiteny maro ao Eoropa, betsaka ny indran-teny avy amin'ny fiteny latina sy avy amin'ny fiteny grika, hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny fiteny romana hafa sy ny fitenin'ny zanatany taloha dia nianjady tamin'ny fiteny anglisy britanika amin'ny fomba tsy dia lalina. Fa ny fianjadian'ny fiteny vahiny dia samihafa eo anivon'ny firenena miteny anglisy maro samihafa (fianjadian'ny fiteny eo an-toerana), ary manao fomba fiteny iray mety manamarika ny anglisy britanika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_anglisy&oldid=971288"
Voaova farany tamin'ny 12 Jiona 2019 amin'ny 16:47 ity pejy ity.